Wararka Maanta: Isniin, Dec 10, 2012-Madaxweynaha Somaliland oo Markii ugu Horreysay ka hadlay Rabshadihii ka dhacay Hargeysa, Farriinna u diray Guddida doorashooyinka
Madaxweynuhu waxa uu sidaas ka sheegay mar uu maanta ka qaybgalay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ee bisha December tobankeeda sanad walba aduunka laga qabto oo lagu qabtay hoteel maansoor ee magaalada Hargeysa.
Munaasibadan lagu xusayo maalinta xuquuqda insaanka waxa soo qayban qaabiyey guddida xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland, waxaana kala soo qaybgalay ururada bulshadda, kuwa naafada, wasaaradda cadaaladda, wasaarada shaqaalaha iyo arrimaha bulshadda iyo hay’adaha caalimiga ah.
Gudoomiyaha Guddidan Xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Somaliland Fatxiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in guddidan uu yahay mid madax banaan, isla markaana xeerkii ay ku shaqayn lahaayeen baarlamaanku meel mariyey, madaxweynuhuna saxeexay, waxaanay madaxweynaha uga mahad naqday dadaalka uu galay dhaqangalinta xeerka xuquuqul insaanka Somaliland.
“maalintani waxa ay calaaamad u tahay maalinta qaramada midoobay u astaysatay maalinta xuquuqda aadamaha, waxan jecelahay in qaadashada maalintani ka timid dhacdo ka timid dagaalkii labaad ee aduunka waxana loo qaatay in aanay dhicin dhibaato ka dhan ah xuquuqda aadanaha”ayey tidhi gudoomiyaha xuquuqda adaamaha Fatxiya Xuseen waxaany intaas ku dartay “ Dadkana waxan kula dardaarmayaa in ay ilaaliyaan xuquuqda aadamaha si looga dheeraado iska hor imaad iyo ku tumasho xuquuda aadamaha ah”.
Sanadkan ayaa hal ku dhag loogu dhigay maalinta xuquuqda aadamaha aduunka xuquuqdaydu iyo codkaygu waa muhiim, taas oo lagu dardargalinayo in la ilaaliyo xaquuqda bani’aadamka.
Gudoomiyaha ururka Haweenka Somaliland Nafiisa Yusuf, ayaa sheegtay in dumarku aanay ka maarmi karin in kooto loo siiyo goleyaasha baarlamaanka, maadaama oo doorashadii dhowaa aan la dooran haweenkii, , taasina ay caqad ku tahay xuquuqda haweenka.
“ Maanta waxan halkan ka cadaynayaa in 142 dumar ah oo isasoo sharaxay aan lahayn gabadh kaliya oo caasimada kasoo baxday, Burco iyo Berbera kasoo baxday, midna taasina waxa ay muujinaysaa in ay aan haweenka Somaliland ka maarmayn kooto. Dumarkaasi dhaqaale kumay hadhin cududna kumay hadhin, laakiin waxan na hortaagan dhaqankii, waxanan doonaynaa in aad noogu hiilisaan kooto aad nasiisaan.”ayey ku dooday Nafiisa Yuusuf oo afka haweenka ku hadlaysay.
Ugu dambayntii waxa munaasibadaasi soo xidhay madaxweynaha Somaliland Md: Axmed Maxamed Maxamuud Siillaanyo, waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda bani’aadamka, waxaanu caalamka ka codsaday in xaquuqda somaliland ku leedahay aduunka ee ah aqoonsiga in la siiyo uu aduunku tixgaliyo.
Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ka hadlay rabshadihii dhowaan ka dhacay magaaladda Hargeysa isagoo sheegay inuu ka xun yahay dadkii wax ku noqday, waxaanu Guddida Doorashooyinka usoo jeediyey inay masuul ka yihiin arrimaha doorashoyinka sidaa darteed ay soo saaraan wax dadka ka farxiya.
“doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka dhacay waxay inoogu dhacday si nabadgalyo ah, balse nasiib daro natiijadii ka soo baxday waxay sababtay dhmasho iyo dhaawac”ayuu yidhi madaxweynuhu, waxaanu fariin u diray guddida doorashooyinka, waxaanu yidhi “komishanka waxaan leeyahay qaranku idinku idin sugayaa, masuuliyada doorashadu idinkay idin saaran tahay, waxaana la idinka sugaya wax ay ummaddu ku faraxdo”
“waxaan ka xumahay dadkii ku dhintay rabshadahaasi, waana ka tacsiyadaynayaa ehelkoodii iyo guud ahaan shacabka Somaliland, waxaan bulshadda Somaliland leeyahay ha la sugo natiijadii doorashadda, nabadda ha la ilaaliyo, madaxweyne ahaan cidna ka ogolaan mayno in wadanka khalkhal galiyo”ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne Axmed Siillaanyo oo ka hadlay rabshadihii maalinta dhowaad ka dhacday magaaladda Hargeysa.
“waxaan caalamka ugu baaqaynaa umaddda Somaliland in badan bay u soo halgameen xuquuqdooda, waxaan leeyahay waa in xuquuqdooda madax banaanidooda ay xaqa u leeyihiin lagu ixtiraamaa oo la siiyaa”ayuu ku soo xidhay hadalkiisii.